Vaovao - Tandremo ireo zavatra ireo alohan'ny hampiasana ny milina fanadiovana voa
Ny milina fanenomana voa dia fitaovana mekanika ilaina amin'ny famokarana fambolena maoderina, ary matetika izy io no ampiasaina amin'ny fitiliana, fanasokajiana ary fanesorana ny loto varimbazaha, katsaka ary voa isan-karazany. Amin'ny maha-mpanadio voa sy mpanamboatra mpanafatra, zarao aminao. Manaraka, andeha isika hiresaka momba ny raharaha maromaro tokony hojerena alohan'ny hampiasana ny milina fanivanana voamaina.
1. Apetraho eo amin'ny toerana marindrano ny milina ary apetraho ireo fitaovana fiarovana elektrika.
2. Jereo raha malalaka na mianjera ny ampahany fampitana, indrindra fa ny maotera vibration.
3. Jereo raha mafy ny visy, ary ny vatan'ny efijery dia tokony handanjalanja amin'ny kodiarana amin'ny tany.
4. Jereo raha misy zavatra vahiny ao amin'ny fantson-drano lehibe sy ny fantson-drano.
5. Hamarino ny fitarihan'ny fantson-drano.
Ny milina fanadiovana voamaina amin'ny concentrator fitambarana dia afaka manolo ny efijery araka ny haben'ny voa, izay mety amin'ny katsaka, soja, varimbazaha, vary, voan'ny tanamasoandro ary voamadinika hafa. Tsy misy vovoka mipoitra mandritra ny fanadiovana voa, izay manova be ny tontolo iasan'ny milina. Ny vokatra dia misy mpankafy centrifugal, mpanangom-bovoka, ary fanariana rivotra mihidy. Mora ny mihetsika, ary mety hahatratra 90% ny haavon'ny fanadiovana. Ny fahafahana manadio dia: 10 taonina/ora.
Ny fepetra ara-teknolojia amin'ny fanodinana voa dia tsy maintsy tanterahina miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana mifanaraka amin'izany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny milina tokana mba hamenoana andian-fitaovana sy ny fandevonan-kanina sy ny hisakana ny fiasan'ireny fitaovana nafarana, voamadinika fitaovana nahafeno ny fepetra ny fanodinana teknolojia amin'ny lafiny iray. Mba hanatsarana bebe kokoa ny haavon'ny fampandrosoana sy hahatonga ny mekanika fampisehoana ny fitaovana mahafeno ny fepetra famolavolana, ary mahafeno ny filana eo an-toerana fanodinana sy ny fitaovana debugging, raha mandinika ny rafitra sy ny teknolojia ny fitaovana, dia ilaina ny mitandrina. amin'ny fitsapana ny mari-pamantarana mekanika sy ny fahombiazan'ny fitaovana mba hahafeno ny fepetra takian'ny fizotran'ny fanodinana.
Fikojakojana ny milina fantenana voamaina:
1. Ny toerana fiantsonan'ny milina fifantenana dia tokony ho fisaka sy mafy orina, ary ny toerana fiantsonan'ny fiara dia tokony hoheverina ho mety amin'ny fanesorana vovoka.
2. Alohan'ny fandidiana, jereo raha tery ny visy mampifandray ny tapany tsirairay, na mihodikodina flexibly ny faritra fampitana, na misy feo tsy mahazatra, ary raha mety ny fihenjanan'ny tariby fampitana.
3. Rehefa manova karazany mandritra ny fandidiana, dia tokony hodiovina ny poti-tsakafo sisa tavela ao amin'ny milina, ary tokony hanohy ny milina mandritra ny 5-10 minitra. Amin'izay fotoana izay ihany koa, avereno im-betsaka ny fampandehanan-drivotra eo anoloana sy aoriana mba hanesorana ireo sisa tavela ao amin'ny efitrano anoloana, afovoany ary aoriana. Karazana sy loto.
4. Raha voafetran'ny fepetra ary tsy maintsy miasa any ivelany, ny milina dia tokony hijanona ao amin'ny toerana fialokalofana ary apetraka amin'ny rivotra mba hampihenana ny fiantraikan'ny rivotra amin'ny vokatry ny fifantenana. Rehefa lehibe noho ny ambaratonga 3 ny hafainganan'ny rivotra, dia tokony hojerena ny fametrahana ny sakana amin'ny rivotra.
5. Ny teboka fanosotra dia tokony ho feno solika alohan'ny fandidiana tsirairay, diovina sy hojerena rehefa vita, ary tokony hofoanana ara-potoana ny lesoka.
Mivarotra Seed Cleaner sy Grader ihany koa ny orinasanay, tongasoa eto aminay.